အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းနှင့် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ - Myanmar Network
အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းနှင့် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ
Posted by Language Republic on March 16, 2013 at 9:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယူကေ (UK) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း၊ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေဟာ proposal လို့ခေါ်တဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း က စပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်တော့ အမျိုးသားက ဒူးတစ်ဖက်ထောက် (goes down on one knee) ပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံ (pops the question) ပါတယ်။
အမျိုးသားအနေဖြင့် အမျိုးသမီးထံမှ “Yes” ဆိုတဲ့ လက်ခံတဲ့အဖြေကို ရရှိရင်တော့ သူတို့နှစ်ဦး စေ့စပ်လိုက်ကြ (engaged) ပါတယ်။ ထုံးစံအရ အမျိုးသားက သူနဲ့ စေ့စပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီး (fiancée) ကို စေ့စပ်လက်စွပ် (engagement ring) ၀ယ်ပေးရပါတယ်။ စေ့စပ်လက်စွပ်ဟာ အများအားဖြင့်တော့ စိန်လက်စွပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေ့စပ်ခြင်းဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးအနက် ဘယ်တစ်ယောက်ကမှ စေ့စပ်ခြင်းကို ဖျက်သိမ်းဖို့ (breaks off the engagement) မလုပ်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ပါပဲ။
မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကို စီစဉ်ခြင်း (Planning the wedding)
ယူကေ (U.K)မှာ ပြုလုပ်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲတွေ ကတော့ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး မင်္ဂလာဆောင် (Civil Ceremony) တတ်ကြသလို ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ကျင်းပရတဲ့ သတို့သမီးက မင်္ဂလာဝတ်စုံအဖြူရောင်ကို ၀တ်ဆင်ပြီး ရိုးရာအရ မင်္ဂလာဆောင် (white wedding) ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ (ဘာသာကွဲများအတွက်လည်း ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော သီးခြား မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများ ရှိပါတယ်)။ စေ့စပ်ထားတဲ့ စုံတွဲအနေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ မင်္ဂလာပွဲကို စီစဉ်ရတာဟာ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြီးအလုပ်ရှုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်း၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပန်းအလှဆင်ခြင်းအစရှိ တာတွေကို စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာအရ မင်္ဂလာဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရားရုံးမှာ မင်္ဂလာဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မဖြစ် မနေလုပ်ရမဲ့ အစီအစဉ်အချို့ ကတော့ ဧည့်သည်စာရင်းကြိုတင်ပြုစုခြင်း (draw upaguest list)၊ ဖိတ်စာများ ဝေခြင်း၊ မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးတဲ့အခါ ဧည့်ခံပွဲအတွက် နေရာ (reception venue) ကို ကြိုတင် စာရင်းပေးခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာ သတို့သမီးကို အဖော်ပြုပေးရမဲ့ အပျိုရံများ (bridesmaids) ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊သတို့သားအတွက် လူပျိုရံ (best man)ရွေးချယ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာဝတ်စုံဝယ်ယူခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲပြီးရင် သွားကြမဲ့ ပျားရည်ဆမ်းခရီး (honeymoon) ကို ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်း၊ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေက မင်္ဂလာစုံတွဲအတွက် လက်ဖွဲ့ဝယ်ပေးတဲ့အခါ ဘာဝယ်ရမယ်ဆိုတာကိုရွေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းစာရင်း (wedding list) ပြုစုခြင်းနှင့် မင်္ဂလာလက်စွပ်များ (wedding rings)ရွေးချယ်ခြင်း အစရှိတာတွေကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
မင်္ဂလာနေ့ (The big day)
မင်္ဂလာနေ့မှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို အရင်ဦးဆုံးရောက်ရှိတာကတော့ သတို့သားနဲ့ လူပျိုရံတို့ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ သူတို့ရောက်ပြီးနောက် ဧည့်သည်တွေရောက်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှ ရောက်ရှိတာကတော့ သတို့သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအရ သတို့သမီးဟာ ရေသီနား (train) ပါရှိတဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံ ဂါဝန်အဖြူ အရှည် (wedding dress) ကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး မျက်နှာကို ပုဝါပါးပါး (veil)ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါတယ် လက်ထဲမှာတော့ ပန်းစည်းကို ကိုင်ထားပြီး တူညီဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အပျိုရံများက ခြံရံထားပါတယ်။ ထုံးစံအရ ခန်းမရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့နေရာ (altar) မှာ စောင့်နေတဲ့ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်ဆီသို့ သတို့သမီးကို သူ၏ ဖခင်ဖြစ်သူက မင်းလမ်းတစ်လျှောက် တွဲ၍ ခေါ်ဆောင်သွား (walks her down the aisle) ပါတယ်။ အော်ဂင်မှနေ၍ မင်္ဂလာ တီးလုံး (wedding march) ကို တီးတဲ့အခါမှာတော့ ဧည့်သည်တွေအားလုံး မတ်တပ်ရပ် (rise to their feet) ပြီး သတို့သမီးနှင့် အဖွဲ့တို့ စီတန်းဝင်လာတာကို ကြည့်ကြပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးစောင့်နေတဲ့ နေရာကို ရောက်တဲ့ အခါ သတို့ သမီးက သတို့သားနှင့် ယှဉ်ရပ်ပြီး ၀တ်ပြုပွဲကို စတင်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတဲ့ ၀တ်ပြုပွဲမှာတော့ သမာကျမ်းစာအုပ် (Bible) ထဲက ကောက်နှုတ်ချက်များ (readings) နဲ့ ဓမ္မတေး (hymns) နှစ်ပုဒ်လောက်ပါဝင် လေ့ရှိပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးအနေနဲ့ အမြဲမေးရတာကတော့ ဒီမင်္ဂလာ ပွဲကို ကန့်ကွက်မဲ့သူရှိမရှိဆိုတဲ့ (objections to the marriage) အချက်ကို ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ပြောရင်ပြော မပြောရင် နောက်ဘယ်သောအခါမှ ကန့်ကွက်ဖို့ အခွင့်အရေးရမှာ မဟုတ်ပါ။ ၀တ်ပြုပွဲရဲ့ အဆုံးမှာတော့ မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ဟာ မင်္ဂလာလက်စွပ် တွေလဲလှယ် (exchange wedding rings) ပြီးတာနဲ့ လင်မယားအရာ မြောက်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း (proclaimed man and wife) ခံရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ မင်္ဂလာသတို့သားက မင်္ဂလာသတို့သမီးကို အကြင်နာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေ ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မင်္ဂလာ စုံတွဲဟာ ထိန်းမြားခြင်းမှတ်တမ်းထဲမှာ လက်မှတ်ထိုး (sign the marriage register) ကြရပါတယ်။ မင်္ဂလာဇနီး မောင်နှံဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲက ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဧည့်သည်တွေဟာ ရောင်းစုံစက္ကူစသေးသေးလေးတွေ (confetti) ကို ကြဲလေ့ရှိပြီး ဓာတ်ပုံဆရာတွေကလည်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံအမျိုးမျိုးကို ရိုက်ကြပါတယ်။
မင်္ဂလာနေ့မှာပါဝင်တဲ့နောက်အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ (reception) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဧည့်ခံ ပွဲကတော့ အများအားဖြင့် ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာ ခမ်းနားတဲ့ နေ့လည်စာ စားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လည်စာစားပြီးချိန် မှာတော့ မိန့်ခွန်းများ (speeches) ပြောကြပါတယ်။ သတို့သမီးရဲ့ ဖခင်က စပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ လူပျိုရံက သတို့သားကို ရှက်ကိုးရှက်ကမ်းဖြစ်စေမဲ့ ဟာသနှောတဲ့ မိန့်ခွန်းကို ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျမှ သတို့သား (သို့) သတို့သမီးက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပါတယ်။
တချို့မင်္ဂလာမောင်နှံတွေကတော့ ညနေပိုင်းဧည့်ခံပွဲ (evening reception) ကို စီစဉ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တီးဝိုင်း သို့မဟုတ် ဒစ္စကို ကို ငှားပေးပါတယ်။
ထိုနေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ စုံတွဲ (happy couple) ဟာ ပျားရည်ဆန်းခရီးကို ထွက်ခွာသွားခြင်း (leave on honeymoon) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ တခြားဝေါဟာရများ (Other wedding vocabulary)
Pre-wedding nerves = မင်္ဂလာပွဲမတိုင်မီ အကြို စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း
Wedding bells = မင်္ဂလာခေါင်းလောင်းသံ (မင်္ဂလာစုံတွဲ ဘုရားကျောင်းထဲက ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ဘုရားကျောင်းရှိ ခေါင်းလောင်းများမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရိုးရာခေါင်းလောင်းသံများ)
Wedding cake = မင်္ဂလာကိတ်မုန့် (အဲဒါကတော့ မင်္ဂလာစားသောက်ပွဲ အပြီးသတ်၌ စားရသော အဆင့် (၃) ဆင့်ပါတဲ့ ရိုးရာမင်္ဂလာကိတ်မုန့်ဖြစ်ပါတယ်)
အိမျထောငျပွု ခွငျးနှငျ့ မင်ျဂလာဆောငျခွငျးဆိုငျရာ ဝေါဟာရမြား
ယူကေ (UK) ကဲ့သို့သော နိုငျငံမြိုးမှာတော့ အိမျထောငျပွု ခွငျး၊ မင်ျဂလာဆောငျခွငျးဆိုတာတှဟော proposal လို့ချေါတဲ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး က စပါတယျ။ အစဉျအလာအားဖွငျ့တော့ အမြိုးသားက ဒူးတဈဖကျထောကျ (goes down on one knee) ပွီး လကျထပျခှငျ့တောငျးခံ (pops the question) ပါတယျ။
အမြိုးသားအနဖွေငျ့ အမြိုးသမီးထံမှ “Yes” ဆိုတဲ့ လကျခံတဲ့အဖွကေို ရရှိရငျတော့ သူတို့နှဈဦး စစေ့ပျလိုကျကွ (engaged) ပါတယျ။ ထုံးစံအရ အမြိုးသားက သူနဲ့ စစေ့ပျထားတဲ့အမြိုးသမီး (fiancée) ကို စစေ့ပျလကျစှပျ (engagement ring) ၀ယျပေးရပါတယျ။ စစေ့ပျလကျစှပျဟာ အမြားအားဖွငျ့တော့ စိနျလကျစှပျပဲ ဖွဈပါတယျ။ စစေ့ပျခွငျးဟာ နှဈနဲ့ခြီပွီးကွာနိုငျပါတယျ။ နှဈဦးအနကျ ဘယျတဈယောကျကမှ စစေ့ပျခွငျးကို ဖကျြသိမျးဖို့ (breaks off the engagement) မလုပျဘူးဆိုရငျ နောကျတဈဆငျ့ကတော့ မင်ျဂလာဆောငျဖို့ပါပဲ။
မင်ျဂလာဆောငျအခမျးအနားကို စီစဉျခွငျး (Planning the wedding)
ယူကေ (U.K)မှာ ပွုလုပျတဲ့ မင်ျဂလာပှဲတှေ ကတော့ တရားရုံးမှာ လကျမှတျထိုးပွီး မင်ျဂလာဆောငျ (Civil Ceremony) တတျကွသလို ဘုရားရှိခိုးကြောငျးမှာ ကငျြးပရတဲ့ သတို့သမီးက မင်ျဂလာဝတျစုံအဖွူရောငျကို ၀တျဆငျပွီး ရိုးရာအရ မင်ျဂလာဆောငျ (white wedding) ကွတာလညျး ရှိပါတယျ။ (ဘာသာကှဲမြားအတှကျလညျး ၄ငျးတို့နှငျ့သကျဆိုငျသော သီးခွား မင်ျဂလာဆောငျအခမျးအနားမြား ရှိပါတယျ)။ စစေ့ပျထားတဲ့ စုံတှဲအနနေဲ့ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးမှာ မင်ျဂလာဆောငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျရငျတော့ မင်ျဂလာပှဲကို စီစဉျရတာဟာ ခကျခဲရှုပျထှေးပွီးအလုပျရှုပျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလိုစီစဉျတဲ့အခါမှာ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးကို ကွိုတငျစာရငျးပေးခွငျး၊ ၀တျပွုဆုတောငျးမှုကို ရှေးခယျြခွငျး၊ ပနျးအလှဆငျခွငျးအစရှိ တာတှကေို စီစဉျရမှာဖွဈပါတယျ။ ရိုးရာအရ မင်ျဂလာဆောငျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ တရားရုံးမှာ မင်ျဂလာဆောငျတာပဲဖွဈဖွဈ မဖွဈ မနလေုပျရမဲ့ အစီအစဉျအခြို့ ကတော့ ဧညျ့သညျစာရငျးကွိုတငျပွုစုခွငျး (draw upaguest list)၊ ဖိတျစာမြား ဝေခွငျး၊ မင်ျဂလာအခမျးအနားပွီးတဲ့အခါ ဧညျ့ခံပှဲအတှကျ နရော (reception venue) ကို ကွိုတငျ စာရငျးပေးခွငျး၊ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးထဲမှာ သတို့သမီးကို အဖျောပွုပေးရမဲ့ အပြိုရံမြား (bridesmaids) ကို ရှေးခယျြခွငျး၊သတို့သားအတှကျ လူပြိုရံ (best man)ရှေးခယျြခွငျး၊ မင်ျဂလာဝတျစုံဝယျယူခွငျး၊ မင်ျဂလာပှဲပွီးရငျ သှားကွမဲ့ ပြားရညျဆမျးခရီး (honeymoon) ကို ကွိုတငျစီစဉျခွငျး၊ ဖိတျကွားထားတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေ မင်ျဂလာစုံတှဲအတှကျ လကျဖှဲ့ဝယျပေးတဲ့အခါ ဘာဝယျရမယျဆိုတာကိုရှေးနိုငျမဲ့ပစ်စညျးစာရငျး (wedding list) ပွုစုခွငျးနှငျ့ မင်ျဂလာလကျစှပျမြား (wedding rings)ရှေးခယျြခွငျး အစရှိတာတှကေို ဆောငျရှကျရပါတယျ။
မင်ျဂလာနေ့ (The big day)
မင်ျဂလာနမှေ့ာ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးကို အရငျဦးဆုံးရောကျရှိတာကတော့ သတို့သားနဲ့ လူပြိုရံတို့ပဲဖွဈပါ တယျ။ သူတို့ရောကျပွီးနောကျ ဧညျ့သညျတှရေောကျလာပါတယျ။ နောကျဆုံးမှ ရောကျရှိတာကတော့ သတို့သမီးပဲဖွဈပါတယျ။ ထုံးစံအရ သတို့သမီးဟာ ရသေီနား (train) ပါရှိတဲ့ မင်ျဂလာဝတျစုံ ဂါဝနျအဖွူ အရှညျ (wedding dress) ကို ၀တျဆငျထားပွီး မကျြနှာကို ပုဝါပါးပါး (veil)ဖွငျ့ ဖုံးအုပျထားပါတယျ လကျထဲမှာတော့ ပနျးစညျးကို ကျိုငျထားပွီး တူညီဝတျစုံဝတျဆငျထားတဲ့ အပြိုရံမြားက ခွံရံထားပါတယျ။ ထုံးစံအရ ခနျးမရဲ့ထိပျမှာရှိတဲ့သနျ့ရှငျးစငျကွယျတဲ့နရော (altar) မှာ စောငျ့နတေဲ့ သိက်ခာတျောရ ဆရာတျောဆီသို့ သတို့သမီးကို သူ၏ ဖခငျဖွဈသူက မငျးလမျးတဈလြှောကျ တှဲ၍ ချေါဆောငျသှား (walks her down the aisle) ပါတယျ။ အျောဂငျမှနေ၍ မင်ျဂလာ တီးလုံး (wedding march) ကို တီးတဲ့အခါမှာတော့ ဧညျ့သညျတှအေားလုံး မတျတပျရပျ (rise to their feet) ပွီး သတို့သမီးနှငျ့ အဖှဲ့တို့ စီတနျးဝငျလာတာကို ကွညျ့ကွပါတယျ။ ဘုနျးတျောကွီးစောငျ့နတေဲ့ နရောကို ရောကျတဲ့ အခါ သတို့ သမီးက သတို့သားနှငျ့ ယှဉျရပျပွီး ၀တျပွုပှဲကို စတငျပါတယျ။ နာရီဝကျလောကျကွာတဲ့ ၀တျပွုပှဲမှာတော့ သမာကမျြးစာအုပျ (Bible) ထဲက ကောကျနှုတျခကျြမြား (readings) နဲ့ ဓမ်မတေး (hymns) နှဈပုဒျလောကျပါဝငျ လရှေိ့ပါတယျ။ ဘုနျးတျောကွီးအနနေဲ့ အမွဲမေးရတာကတော့ ဒီမင်ျဂလာ ပှဲကို ကနျ့ကှကျမဲ့သူရှိမရှိဆိုတဲ့ (objections to the marriage) အခကျြကို ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ပွောရငျပွော မပွောရငျ နောကျဘယျသောအခါမှ ကနျ့ကှကျဖို့ အခှငျ့အရေးရမှာ မဟုတျပါ။ ၀တျပွုပှဲရဲ့ အဆုံးမှာတော့ မင်ျဂလာမောငျနှံတို့ဟာ မင်ျဂလာလကျစှပျ တှလေဲလှယျ (exchange wedding rings) ပွီးတာနဲ့ လငျမယားအရာ မွောကျကွောငျး ကွငွောခွငျး (proclaimed man and wife) ခံရပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာတော့ မင်ျဂလာသတို့သားက မင်ျဂလာသတို့သမီးကို အကွငျနာ ပေးနိုငျပါတယျ။ ဧညျ့သညျတှေ ထှကျခှာသှားပွီးတဲ့အခါမှာတော့ မင်ျဂလာ စုံတှဲဟာ ထိနျးမွားခွငျးမှတျတမျးထဲမှာ လကျမှတျထိုး (sign the marriage register) ကွရပါတယျ။ မင်ျဂလာဇနီး မောငျနှံဘုရားရှိခိုးကြောငျးထဲက ထှကျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဧညျ့သညျတှဟော ရောငျးစုံစက်ူကစသေးသေးလေးတှေ (confetti) ကို ကွဲလရှေိ့ပွီး ဓာတျပုံဆရာတှကေလညျး မှတျတမျးတငျဓာတျပုံအမြိုးမြိုးကို ရိုကျကွပါတယျ။
မင်ျဂလာနမှေ့ာပါဝငျတဲ့နောကျအစီအစဉျတဈခုကတော့ မင်ျဂလာဧညျ့ခံပှဲ (reception) ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီဧညျ့ခံ ပှဲကတော့ အမြားအားဖွငျ့ ဟိုတယျတဈခုခုမှာ ခမျးနားတဲ့ နလေ့ညျစာ စားပှဲဖွဈပါတယျ။ နလေ့ညျစာစားပွီးခြိနျ မှာတော့ မိနျ့ခှနျးမြား (speeches) ပွောကွပါတယျ။ သတို့သမီးရဲ့ ဖခငျက စပွောပါတယျ။ ပွီးတော့ လူပြိုရံက သတို့သားကို ရှကျကိုးရှကျကမျးဖွဈစမေဲ့ ဟာသနှောတဲ့ မိနျ့ခှနျးကို ပွောပါတယျ။ နောကျဆုံးကမြှ သတို့သား (သို့) သတို့သမီးက ကြေးဇူးတငျစကားပွောကွပါတယျ။
တခြို့မင်ျဂလာမောငျနှံတှကေတော့ ညနပေိုငျးဧညျ့ခံပှဲ (evening reception) ကို စီစဉျကွပွီး သူတို့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှအေတှကျ တီးဝိုငျး သို့မဟုတျ ဒစ်စကို ကို ငှားပေးပါတယျ။
ထိုနရေဲ့ နောကျဆုံးအစီအစဉျကတော့ ပြျောရှငျနတေဲ့ စုံတှဲ (happy couple) ဟာ ပြားရညျဆနျးခရီးကို ထှကျခှာသှားခွငျး (leave on honeymoon) ပဲ ဖွဈပါတယျ။
မင်ျဂလာဆောငျခွငျးဆိုငျရာ တခွားဝေါဟာရမြား (Other wedding vocabulary)
Pre-wedding nerves = မင်ျဂလာပှဲမတိုငျမီ အကွို စိတျလှုပျရှားခွငျး
Wedding bells = မင်ျဂလာခေါငျးလောငျးသံ (မင်ျဂလာစုံတှဲ ဘုရားကြောငျးထဲက ထှကျလာတဲ့အခါမှာ ဘုရားကြောငျးရှိ ခေါငျးလောငျးမြားမှ ထှကျပျေါလာတဲ့ ရိုးရာခေါငျးလောငျးသံမြား)
Wedding cake = မင်ျဂလာကိတျမုနျ့ (အဲဒါကတော့ မင်ျဂလာစားသောကျပှဲ အပွီးသတျ၌ စားရသော အဆငျ့ (၃) ဆငျ့ပါတဲ့ ရိုးရာမင်ျဂလာကိတျမုနျ့ဖွဈပါတယျ)
Permalink Reply by Cherry Mon on June 10, 2014 at 17:05
Permalink Reply by Zaw Myo on November 18, 2014 at 15:47
Permalink Reply by winn sann on November 20, 2014 at 19:02
thanksalot . i want to study alsoagreed ing words which are using in every speech starting . if u can please post phase by phrase .tks. i hope i ll get as soon as possible .
Permalink Reply by Htet Htet on November 10, 2015 at 19:37